Ụbọchị My Pet » Ngwa ngwa Checkmate si Nduzi Spotting adịgboroja Online Daters
site Logan nje
Ngwa ngwa Checkmate si Nduzi Spotting adịgboroja Online Daters
emelitere ikpeazụ: Oct. 28 2020 | 3 min agụ
Mgbe ụfọdụ, ha na-dị nnọọ na-enwe olileanya maka ntị. Mgbe ụfọdụ, ha na-oru nta akuko-agbalị ime ka a onu. Na mgbe ụfọdụ ha dị nnọọ chọrọ ojoro ị. Ihe ọ bụla ha akpali, a ịrịba mmaji nke online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị profaịlụ bụ zuru ezu fakes - fictional profaịlụ e mere iji dupe n'eziokwu online daters. Na ọ bụrụ na ị na-anya, ị nwere ike ịbụ ọzọ aja.
Nke a Come omume, dubbed dị ka catfishing, wastes ndị mmadụ oge na ego ọ bụla otu ụbọchị. Ezie na ihe ka nnọọ ọtụtụ nke online daters dị ebube ndị mmadụ, e nwere ihe ole na ole ọjọọ àkwá si n'ebe. Dabara nke ọma, online scammers agbasaghị ghara ịbụ Sharpest knives na drawer, n'ihi ya, ha na-emekarị ka mfe mejọrọ na ikpu apụ ha aghụghọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji hụ na gị na-esote ụbọchị n'ezie bụ ndibiat, na-ndị a dị mfe Atụmatụ n'uche gị n'oge online njem n'ebe romance.
1) Gbaa A rịvasị Image Search
A adịgboroja akaụntụ pụtakwara adịgboroja foto. Mgbe online wayo rụọ a adịgboroja online profaịlụ, na ha ga-emekarị jidere foto ha na-ahụ kwụsịrị Internet. Nrụtụ, ndị na ha na-mgbe ha google "ọkụ Ihọd" ma ọ bụ "na-ekpo ọkụ girl." Ha Aga ọbụna bulite headshots si ịme ngosi uwe saịtị na-eme ka ha profaịlụ dị ka alluring dị ka o kwere. Ndi gaghị ghọgburu. Otu ụzọ dị mfe ịhụ na ọ bụrụ na ha online ndise bụ a oyiri bụ site na-agba ọsọ a Google agbara image search. Ọ bụrụ na ha profaịlụ foto a techie nile Internet, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na foto a doro anya na onye ọzọ, ị ga-amarakwa na ị nwetara a catfisher gị n'aka.
2) Lee ka ihe tara English
Ọ bụrụ na ha profaịlụ na-eme ka ha na-adị ka ha amuru ma zulite na-ekwu, ma ha ụtọ asụsụ na-ada ka onye na-dị nnọọ na-amụ asụsụ, na bụ nnukwu red ọkọlọtọ. Online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị scammers bụ ugboro ugboro esenidụt. Ha ga-asị na ha na-dị ka American dị ka Ugwu Rushmore, ma n'eziokwu ha dị nnọọ na-ekwu na iji na-American ego. Ọ bụrụ na gị online paramour mgbe niile na-eme ka mkpoputa na asụsụ emehie ga-adịghị ofufe na a 3rd ọkwa klas, ọ pụtara na ha na-a mba ọzọ scammer.
3) Ime ihe Online Mụrụ Tulee
Public ndekọ dị ka onye ọ bụla chọrọ ịhụ ha. Ya mere ọ bụrụ na onye kpọtụụrụ ị online akamanade ke United States, ha kwesịrị inwe a ọha ndekọ faịlụ. Chọọ aha ha, ndị ha na ha na steeti, na online ọha ndekọ search. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-abịa, na nke ahụ bụ ihe ịrịba ama na ha na-agaghị na-kpam kpam ihe n'eziokwu na ị na-.
4) Lezie Fast rụọ
Ọ bụrụ na mmadụ online chọrọ na-awụlikwa elu na "Ịmata gị" na-aga ogologo n'ime "Soulmates maka ndụ" ogbo nke mmekọrịta, nwere ike ọ gaghị na-n'ihi na ha na a omiiko ihunanya. Ọ pụrụ ịbụ n'ihi na ha na ndị ọzọ nwere mmasị na gị obere akpa karịa gị obi. Ebe ọ bụ na online scammers na-akpali irite mmetụta ịhụnanya gị dị ka ngwa ngwa dị ka o kwere, na ha ga-akpali ibu ngwa-ngwa. Na-enyo enyo ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị na-ejide na a Nnukwu ajoo ikuku online romance, na-a abụọ ịkụda na abụọ ego na ihe niile ha na-ekwu bụ eziokwu.
5) Lee Ọ bụrụ na Ha chọrọ naanị Nkata Online
Bụ 100% nke nkwurịta okwu mere site email na ederede? A jụrụ akpọ ma ọ bụ izute ihu na ihu nwere ike na-egosi ihe karịrị oké ihere. Ọ pụtara na ha na-achọghị inye gị ihe ọ bụla na obi abụọ na ha ụgha. Nghọta bụ isi ihe na-enwe ezi mmekọrịta. Ọ bụrụ na ha nwere ike ọ bụghị n'ihu ọha kpọtụrụ gị, na-na dị ka ihe ịrịba ama na ha na-enweghị mmasị na ị na niile.
N'ikpeazụ, ma ọ bụrụ na ị na-Ghọgbuo Gị site na online scammer na ha na swindled gị nke ego ọ bụla, na-akọ ya na gọọmenti etiti si Internet Mpụ Mkpesa Center. Ọ pụrụ ịbụ a bit ihere ikweta na ị na-aghọgbu, ma akuko ga nyere aka gbochie ndị ọzọ si na-scammed.